Wararka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 1670
Home Wararka Page 1670
Ciidamada dalka Ethiopia oo lagu arkey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Ciidamada ethiopia ayaa lagu soo waramayaa in ay soo gaareen gobolka baay magaalada Baydhabo iyagoo ku socda magaca Amisom oo ay hore u diidi jireen. Dhawaan ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobey waxey ogolaadeen in ciidamada dalka ethiopia lagu daro ciidamada Amisom kadib markii ay ka hinaaseen kuwa kenya iyo...
Dagaalka Ethiopia oo La Sheegayo In Ciidamada Federalku ku Sii Siqayaan Magaalada Mekelle.
Dowladda ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii dhawaanayaan magaalada Mekelle ee caasimada gobolka Tigray, kadib markii laga gudbay waqti laba toddobaad oo dagaal ah. “Ficilka ugu dambeeya ee fulinta sharciga waxaa la fulin doonaa maalmaha soo socda,” waxaa sidaas yiri ra’iisul wasaare Abiy Ahmed. Guddiga Abiy u xil saaray dagaalka...
Gudoomiye waaxeed ka tirsan degmada Yaaqshiid oo lagu diley agagaarka Tawfiiq ee isla degmada yaaqshiid…
Gudoomiye waaxeed kamid ah gudoomiye waaxeedyada degmada Yaaqshiid ayaa lagu diley agagaarka Tawfiiq ee degmada Yaaqshiid. Gudoomiye waaxeedkan oo magaciisa lagu soo gaabiyey Faraweyne ayaa waxaa diley koox ku hubeysan bistoolado,iyagoo goobta ka baxsadey markii ay marxuumkan dileen. Maamulka ugu sareeya degmada Yaaqshiid ninka gudoomiyaha ka ah Muxiyadiin Xasan Jurus ayaa...
Wasaaradda warfaafinta iyo warbaahinta madaxa banaan oo kulan ku yeeshey xarunta wasaaradda warfaafinta…
Kulan maanta ay ku yeesheen xarunta wasaarada warfaafinta dawlada federalka soomaaliya bahda warfaafinta madaxa banaan iyo madaxda cusub ee xukuumada uu hugaamiyo R/w C/weli Sheekh Axmed. Kulanka oo ay ka qeyb galeen xubno ka socdey warbaahinta madaxa banaan iyo xubno uu horkacayey wasiirka cusub Mustaf Dhuxuloow,waxaana looga hadley siidii wasaarada...
Xarakada dagaalyahanada Alshabaab ayaa meelo kala duwan oo dalka soomaaliya ah weerar kusoo qaadey kuwaas oo kala ah puntland'lafoole iyagoo la kulmey iska caabin dhanka ciidamada dawlada iyo kuwa Amisom. Xarakada dagaalyahanada Alshabaab ayaa waxey beryahan wadey weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah taas oo niyad jab ku ridey...
Qaraxyo kala duwan ayaa muqdisho laga maqley kuwaas oo qaarkood lagu tuurey guri ay fanaaniinta hobolada waaberi qaarkood ay heesaha ku baroobeyn jireen guriga qaraxa lagu tuurey ayaa waxa uu kuyaal degmada waaberi. Guriga ayaa lagu weerarey bambo gacmeed lamana oga sida wax u gaareen dadki guriga ku sugnaa,waxaana sidoo...
Shirkii Kismaayo Oo Fashil Ku Soo Dhamaadey,Iyo Madaafiic Lagu Weeraray Hoyga Axmed Madowe
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in markale ay duqeymo xooggan ku dhaceen xarumo ay degganyihiin saraakiisha maamulka Jubba. Dagaalyahnada xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay fiidkii madaafiic ku garaacay madaxtooyada Kismaayo iyo saldhig ciidan. Waa habeenkii 2-aad xiriir ah oo duqeymo loo geysto madaxtooyada Kismaayo oo uu ku suganyahay...
Madaxweyne xasan sheekh iyo wufuud uu hugaaminayey oo gaarey dalkaasi jabaan.
Madaxweynaha iyo wufuuda uu hugaaminayo ayaa gaarey dalka jabaan iyagoo kulamo la leh madaxda dalkaasi jabaan. Madaxweyne xasan shekh maxamuud ayaa qaaradda asia ugu horeyn ka tagey dalka jabaan oo mashaariic farabadan ka qabanjirey dalka somaaliya kuwaasoo la filayo in ay dib u hawl galaan booqashada m/weynaha kadib,iyadoo sidoo kale...
Dagaal u dhaxeeya ciidamada burundi iyo dgaalyahanada Alshabaab oo ka dhacey duleedka Afgooye.
Dagaal aad u daran ayaa caawa ka dhacey duleedka afgooye kaas oo u dhaxeeyey ciidamada Amisom iyo dagaalyahanada xarakada alshabaab,waxaana la maqlayey madaafiic cul culus iyo rasaas,lamana oga khasaaraha ka dhashey dagaalka ay weerarkiisa soo qaadeen dagaalyahanada Alshabaab. Xarakada Alshabaab ayaa laga qabsadey meelo badan oo ay maamulijireen,waxeyna ku bedeleen...
Beelo kasoo jeeda jubbooyinka oo kasoo horjeestey shirka dib u heshiisiinta jubbooyinka.
Beelo dega jubooyinka ayaa qaadacey kana horyimid shirka lagu soo gabangabeeyey muqdisho,waxeyna sheegeen in shirkaasi uusan aheyn dib u heshiisiin ee uu yahey mid iska horkeenaya dadka wada dega jubbooyinka. Beelaha direed ayaa shirka iskaga baxey,horane kuwo kale ayaa dhaliiley,iyadoo ay sidoo kale xildhibaano gaaraya lixdan ay ka horyimaadaan shirkan...
1...1,6691,6701,671...1,693Page 1,670 of 1,693